Mpanamboatra thermomera nomerika & mpamatsy - China Digital Thermometer Factory
Mpanamboatra mari-pahaizana nomerika nomerika mpamaky hafanana DS-1
Haben'ny ankapobeny: 46.5mm x 27.5mmx 29.5mm
Volavola tsy tantera-drano, azo asitrika anaty rano tanteraka. Azo itokisana ny kalitao, ny kapoaka suction dia azo tsoahina mafy amin'ny rindrina anaty aquarium, ary ny sensor namboarina dia tsara sy malala-tanana.
Faritra fandrefesana ny maripana: -50℃~ 70℃
vahaolana ℃ (> -20 ℃); ℃ (hafa)
Fahamarinana: ± ℃
Famatsiana herinaratra: 1 PCS DC1.5V (LR44 / AG13)
Fomba fampidirana: 1 NTC
Famolavolana hevitra vaovao momba ny hafanana nomerika masoandro DST-50
Famatsiana herinaratra: tontonana masoandro ary bateria backup LR44
Fahamarinana: 1 ℃ (-20 ℃ ~ + 80 ℃);
+ 3 ℃ (-50 ℃ -20 ℃ + 80 ℃ + 150) fe-potoana fakana santionany: 10 segondra
Ny mari-pana momba ny tontolo iainana miasa: -10 ℃ ~ 60 temperature Temperatura fitehirizana: -20 ℃ ~ 70 ℃
Temperature sensor L = 17 mm x D = 5mm
Thermometer elektronika sakafo avo lenta JDB-23
Fanehoana LCD misy famotopotorana azo ahodina, firafitry ny rano
Mihodina herinaratra mandeha 10 minitra tsy misy fandidiana;
Firaketana mari-pana Max; Re-calibrate asa;
Ny fotoana famaliana haingana dia 4S, aforeto / aharato koa ny famotopotorana mba hamonoana / hanodina ny thermometer.
Thermometer anatiny sy hygrometra tsy misy tsipika sensor JDB-60
Fandrefesana ary asehoy ny mari-pana sy ny hamandoana ao anaty trano tadidio avy hatrany ny sanda max / min ny mari-pana sy ny hamandoana ao an-trano eo anelanelan'ny fiasan'ny famantaranandro ℃ / and sy ny lanja fiasan'ny kalandrie asan'ny asa mampatahotra;
Mety amin'ny fitehirizana mangatsiaka, fitahirizana trano, trano, birao ary toerana fampiasana hafa.
220V thermometer elektronika JDP-200 ho an'ny vata fampangatsiahana
Ny mari-pana fampisehoana LCD sy ny hamandoana miaraka amin'ny tontonana anatiny.
Ny mari-pana sy ny hamandoan'ny biby thermometer elektronika JW-6
Lanja mavesatra: 30g
Vokatry ny vokatra: 45 * 15.5mm
Fitaovana: akorandriaka vita amin'ny plastika ABS
Faritra fandrefesana ny maripana: -50～70 ℃
Fahadisoana fandrefesana: ± 1 ℃
Ny refin'ny hamandoana 20%～90%
Famolavolana fampisehoana hamandoana 1%
Fahamarinana fandrefesana hamandoana ± 5%
Ny tsingerin'ny santionany hamandoana dia 10 segondra (1 minitra)
Misy laharana voltage DC1.5v (bateria bokotra 1 AG13 na LR44)
Fitsipika miasa: fisehoan'ny mari-pana fiovan'ny thermistor
Fandrefesana ny mari-pana sy ny hamandoana ao anaty sy ivelan'ny trano JW-100A
Mampiseho ny mari-pana sy ny hamandoana ao anaty trano i Uplink, mampiseho ny mari-pana sy ny hamandoana ivelany;
Ny mari-pana sy ny hamandoana anaty trano avo indrindra sy ambany indrindra dia azo ampiasaina mba hanafoanana ny mari-pana sy ny hamandoana anaty trano farafahakeliny sy ambany indrindra;
Press MAX / MIN / RESET (IN / OUT);
Mety hijoro ny takelaka, ary mety hahantona ny rindrina.
Haben'ny ankapobeny: 46.5mm x 27.5mm x 29.5mm
Faritra fandrefesana ny maripana: -50 ℃ ~ 70 ℃
Fanapahan-kevitra ℃ (> -20 ℃); (Hafa)
LCD mampiseho thermometer nomerika biby fiompy ST-1A
Faritra fandrefesana ny maripana: -50 ℃＋110 ℃ (-58 ℉＋230 ℉)
Famaritana ny mari-pana: ± 1:
Vahaolana aseho: ℃
Masinina: 55mm × 42mm × 16mm
Karazana sensor sy halavany: sensor thermistor, halavan'ny tariby 1 metatra
Ampiasao ny tontolo iainana: mari-pana: 0 ℃＋60 ℃; hamandoana: 20%～85%
Fomba famatsiana herinaratra: batterie bokotra (LR44, 1.5V).
Famokarana famokarana famokarana thermometer nomerika ST-2
Mirefy / mamarana ny mari-pana amin'ny varavarana;
Fampisehoana asan'ny famantaranandro;
Volavola akorandriaka manify.
Thermometer elektronika amin'ny fandrefesana ny hafanan'ny trondro ST-3
Haben'ny fampisehoana: 58mm ny halavany, 36mm ny sakany, 11mm ny hateviny
Ny halavan'ny ampahany amin'ny famotopotorana: tokony ho 90mm
Faritra fandrefesana ny maripana: -50 ℃ - + 60 ℃
Fahamarinana: + -1 ℃
Mampiasà mari-pana momba ny tontolo iainana: -10 ℃ - + 50 ℃
Mampiasà bateria: bateria bokotra 1.5V
Mpamatsy thermométer ara-sakafo TP100 mpamatsy
Kitendry fanovana: ON / OFF;
Fanalahidin'ny fanovana ny mari-pana: ℃ / ℉;
Fitsapana vy maharitra 135mm;
Thermometer ho an'ny lakoziananao、laboratoara、orinasa na BBQ.
fanaraha-maso ny mari-pana incubator, fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy, thermometer nomerika, fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny hafanana, nomerika nomerika mpanara-maso, thermometer nomerika Aquarium,